Worder: Appalabrados | တွင်အနိုင်ရရန်အသုံးပြုနည်း Androidsis
Ignacio Sala | 22/11/2021 18:00 | Android application များ, Android cheat
Netflix ၏ The Squid Game စီးရီးကဲ့သို့ပင် မူလစိတ်ကူးကို အခြေခံထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ လူကြိုက်များသော စကားလုံးဂိမ်းပေါ်လာခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့, နာမည်ကြီးဘုတ်ဂိမ်း Scrabble ကိုအခြေခံသည်။၊ ၎င်းသည် မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများအတွက်လည်း ရနိုင်ပါသည်။
ရံဖန်ရံခါ ဖျော်ဖြေရေးနည်းလမ်းအဖြစ် Apalabrados ကို လက်ခံကျင့်သုံးသူတိုင်းအတွက် ရံဖန်ရံခါဆိုလျှင်၊ သင်ပိတ်မိနေသည် သို့မဟုတ် စကားလုံးရှာမတွေ့ပါ။ သင်လိုအပ်သည်၊ သင့်အားကူညီရန် Worder ဝဘ်ဆိုက်ရှိသည်။
1 Apalabrados ဆိုတာ ဘာလဲ။
2 Apalabrados အလုပ်လုပ်ပုံ
3 Worder ဆိုတာဘာလဲ
4 Worder ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။
6 Worder မှအခြားရွေးချယ်စရာများ
Apalabrados ဆိုတာ ဘာလဲ။
ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ Apalabrados သည် ဂန္တဝင် Scrabble ဘုတ်ဂိမ်း၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော စာလုံးများအားလုံးကို စကားလုံးများဖွဲ့၍ ဘုတ်ပေါ်တွင် နေရာချရန် ရည်ရွယ်သည့်ဂိမ်းဖြစ်သည်။ စာလုံးတစ်လုံးစီတွင် မတူညီသောရမှတ်များရှိပြီး စကားလုံးအတွက် စုစုပေါင်းရမှတ်ရရှိရန် ပေါင်းထည့်ထားသည့် ရမှတ်တစ်ခုရှိသည်။
Apalabrados သည် သင့်အတွက် ရနိုင်ပါသည်။ အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ၊ ကြော်ငြာများနှင့် အက်ပ်အတွင်း ဝယ်ယူမှုများ ပါဝင်သည်။.
စျေးကွက်တွင် 10 နှစ်ကျော်ကြာအောင်၊ ၎င်းသည် Play Store တွင်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံး application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mint နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။စကားလုံးအသစ်များလေ့လာခြင်း၊ ဝေါဟာရချဲ့ထွင်ခြင်း...
La Apalabrados ၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု ဤဂိမ်း၏တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည့် Scrabble GO၊ သည် Apalabrados ထက် လက်တွေ့ကျကျ တူညီသောဒေါင်းလုဒ်များနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်မှုအရေအတွက်ဖြင့် အသုံးပြုသူများမှ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကဲဖြတ်မှုရှိသော အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်။
Scrabble GO ကို သင့်dအတွက် ရနိုင်ပါသည်။အခမဲ့ download, ကြော်ငြာနှင့်ဝယ်ယူမှုပါရှိသည် လျှောက်လွှာအတွင်း။
Apalabrados သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုတွင် ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။ 15 စတုရန်း x 15 စတုရန်း. ဘုတ်ပေါ်တွင် တင်ထားပြီးသော စာလုံးများကို အသုံးပြု၍ အလျားလိုက်နှင့် ဒေါင်လိုက် နှစ်မျိုးလုံး စကားလုံးများကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
အစိမ်း၊ အပြာ သို့မဟုတ် အနီရောင်ဟု အမှတ်အသားပြုထားသည့် သေတ္တာများတွင် ချစ်ပ်ပြားများကို ထည့်ထားလျှင်၊ ရမှတ်ကို တိုးချဲ့ထားသည်။ ဤပုံစံကို လိုက်နာပါ-
DP- စကားလုံးသည် သင့်ရမှတ်ကို နှစ်ချက်မြှောက်သည်။
TP- စကားလုံးက မင်းရဲ့ရမှတ်ကို သုံးနဲ့မြှောက်တယ်။
DL- ဤအကွက်ရှိ စာလုံး၊ သင့်ရမှတ်ကို နှစ်ဆတိုးပါ။
TL- ဤပုံးရှိ စာလုံးသည် သင့်ရမှတ်ကို သုံးဆတိုးစေသည်။
အစမှာ ကစားသမားတစ်ဦးစီသည် တိုကင် ၇ ခု ရရှိသည်။. ပထမကစားသမားသည် ဘုတ်၏ဗဟိုစတုရန်းကိုဖြတ်၍ စကားလုံးတစ်လုံးကို နေရာချရမည်ဖြစ်သည်။ ကစားသမားသည် စကားလုံးတစ်လုံးအတွက် စာလုံးအလုံအလောက်မရှိပါက၊ စကားလုံးတစ်လုံးစီရေးနိုင်သည်အထိ တိုကင်များရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Worder သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ခွင့်ပြုထားသော ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံစံများကို အခြေခံ၍ စကားလုံးများကို ရှာဖွေပါ။Words အတွက်ရော၊ crosswords၊ Scrabble၊ hangman ဂိမ်းနဲ့ တခြားစကားလုံးဂိမ်းတွေရော။ သို့သော်၊ ထို့အပြင်၊ ကဗျာဖန်တီးမှု သို့မဟုတ် ကာရန်စကားလုံးများကို ရှာဖွေခြင်းကဲ့သို့သော အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဤဝဘ်စာမျက်နှာသည် Apalabrados တွင် ရံဖန်ရံခါ အကူအညီတစ်ခုအဖြစ် စံပြဖြစ်နေပါသည်။ သင့်ပြိုင်ဘက်များထက် အရေးကြီးသောအားသာချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။. သင့်အသိပညာကို ယှဉ်ပြိုင်ရန်နှင့် သရုပ်ပြရန် ဂိမ်းတစ်ခုဟု ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် ဂိမ်းအားလုံးကို အနိုင်ရရန် ၎င်းကို ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းသည် အသုံးမဝင်ပါ။
Worder က ကျွန်တော်တို့ကို ကမ်းလှမ်းတယ်။ စကားလုံးများကိုရှာဖွေရန်နည်းလမ်းနှစ်ခု အချိန်တိုင်းလိုတယ်။
ဒီနည်းလမ်းက ကျွန်တော်တို့ကို ခွင့်ပြုပါတယ်။ စကားလုံးဖန်တီးရန် ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော စာလုံးများအားလုံးကို ထည့်သွင်းပါ။. ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် A၊ A, V, O, S စာလုံးများရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုစာလုံးများကို ရှာဖွေရန်အကွက်တွင် (၎င်းသည် အစီအစဥ်အရ အရေးမပါပါ) ကို ဝဘ်မှ ဖွဲ့စည်းနိုင်သော စကားလုံးများအားလုံးကို ပြန်ပို့ပေးမည်၊ အဲဒီစာတွေနဲ့
အဲဒါကို သုံးလို့ရတယ်။ အချို့သောစာလုံးများကို ကြယ်ပွင့်များဖြင့် အစားထိုးခြင်း။အဓိပ္ပါယ်ရှိသော စကားလုံးဖန်တီးရန် ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသော စာလုံးများနှင့် ပေါင်းစပ်မည့် ကြယ်ပွင့်များဖြစ်သည်။ စကားလုံးအစီအစဥ်က အရေးမကြီးပါဘူး။
ဥပမာ VOS** ဆိုတဲ့ စာလုံးကို ရိုက်ထည့်ရင် Worder က ရှာပေးလိမ့်မယ်။ ထိုစာလုံးသုံးလုံးပါ၀င်သော စကားလုံးများထိုစာလုံးများကို တူညီသောအစီအစဥ်တွင် သေချာပေါက်ပြသမည့် စကားလုံးများ။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သော ကြယ်ပွင့်အများဆုံးအရေအတွက်မှာ3ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသောအခါ Apalabrados တွင်အရာများရှုပ်ထွေးလာသည်။ ဘုတ်ပေါ်ရှိပြီးသား စာလုံးများကို အခွင့်ကောင်းယူပါ။ ဤသည်မှာ အချို့သောပုံစံများအလိုက် Worder သည် ကျွန်ုပ်တို့အား စကားလုံးများရှာဖွေရာတွင် ကူညီပေးပုံအချို့ ဥပမာများဖြစ်သည်။
ZU ဖြင့် အစပြုသော "ZU" စကားလုံးများသည် အက္ခရာအကန့်အသတ်မရှိ CLOG.
စာလုံးကန့်သတ်ချက်မရှိ FAZ ဖြင့်အဆုံးသတ်သော "-FAZ" စကားလုံးများ။ interface.
“…” စာလုံး3လုံးပြပါမည်။ သော.
Z အက္ခရာ နှစ်ကြိမ်ပါရှိသော "-ZZ" စကားလုံးများ။ JAZZ.
“..LA” စာလုံးနှစ်လုံးဖြင့် အစပြု၍ LA နှင့်အဆုံးသတ်သော စကားလုံးများ။ ကော်လံတစ်ခုရေးမည့်အစား ကျွန်ုပ်တို့ပိုရေးပါက၊ အမှတ်အရေအတွက်သည် LA အဆုံးမတိုင်မီတွင် ပြသမည့် စာလုံးအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ မကောင်းဘူး။.
"HO-LA" သည် HO ဖြင့် အစပြုကာ A ဖြင့်အဆုံးသတ်သော စာလုံးအကန့်အသတ်မရှိသော စကားလုံးများကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသပါမည်။ ဟလာလာ.
H ဖြင့် အစပြုသော "HL-" စကားလုံးများ၊ မည်သည့်အက္ခရာဖြင့်မဆို နောက်မှလိုက်ပါက L ကိုပြသမည်ဖြစ်ပြီး ဂဏန်းအဆုံးမသတ်ဘဲ မတူညီသောစာလုံးများနောက်သို့လိုက်ပါမည်။ hallo.
"-MI.TE" သည် MI ဖြင့်အဆုံးသတ်သော စကားလုံးများနောက်တွင် အက္ခရာနှင့် NTE ပါရှိသည်။ မင်းစားတယ်။.
"-Z-MIND" စကားလုံးများသည် MIND နှင့် Z ပါ၀င်သည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ.
အတိုချုံးပြောရရင် စကားလုံးတွေကို ရှာဖွေတယ်။ အမှတ်များနှင့် တုံးတိုများပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ အားကိုးရပါမည်။.
အ အမှတ်တရ ကျွန်ုပ်တို့ပြသလိုသော စာလုံးအရေအတွက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
အ scripts အကန့်အသတ်မရှိသော စာလုံးများကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းနှစ်ခုလုံး ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။စကားလုံးအရေအတွက်ကို ထပ်မံလျှော့ချရန်။
သရတွေ အများကြီးရှိရင်တိုတိုတုတ်တုတ်၊ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း သို့မဟုတ် လေးထောင့်တုံးများ ဖန်တီးခြင်းတို့ကို ချိတ်ဆက်ပါ။
သင့်မှာဗျည်းတွေအများကြီးရှိရင်သင်အလုပ်လုပ်သော စကားလုံးဝဏ္ဏများကို ဖန်တီးရန် ၎င်းတို့ကို ချိတ်ဆက်ပါ။
သင်အသုံးပြုသည်။ အမှတ်အများဆုံးစကားလုံးများ အက္ခရာနှင့် စကားလုံး၏ နှစ်ဆ သို့မဟုတ် သုံးဆ သတ်ပုံပါသည့် သေတ္တာများအတွင်း။
သင့်စကားလုံးများကို နေရာတွင် ထားပါ။ နှစ်ထပ် သို့မဟုတ် သုံးဆ သင်၏ဆန့်ကျင်ဘက်ရှေ့တွင် အက္ခရာနှင့် စာလုံးအဖြတ်အတောက်များ။
သင်ပုန်းပေါ်တွင် U ရှိပြီး သင့်တွင် Q စာလုံးပါပါက၊ အမြန်ဆုံး ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
အတူတူဖြစ်ပျက် X နှင့် Ñ, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤအက္ခရာများပါသော စကားလုံးအရေအတွက်သည် Ñ နှင့် သတိရလာသော ပထမစာလုံးထက် လွန်စွာသာလွန်သည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်အချိန်တိုင်းလိုအပ်သည့်စကားလုံးများကိုရှာဖွေရန် ဝဘ်စာမျက်နှာကို အသုံးမပြုလိုပါက၊ သင့်တွင် အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည်။ Apalabrados.org လျှောက်လွှာမှတဆင့်.
လျှောက်လွှာတစ်ခု အတွဲလိုက်ပုံစံများကို အသုံးပြု၍ စာလုံးများနှင့် စကားလုံးများကို ရှာဖွေနိုင်စေပါသည်။ Worder က ကျွန်တော်တို့ကို ပေးထားတာတွေနဲ့ အလွန်ဆင်တူပြီး စာလုံး 12 လုံးအထိ ရှာတွေ့နိုင်စေတယ်။
လက်ခံသည်၊ သင့်အတွက် ရနိုင်ပါသည်။ အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်၊ ကြော်ငြာများပါဝင်သည်။သို့သော် သင်သည် အက်ပ်အတွင်း၌ မဝယ်ပါ။ iOS နှင့် Android နှစ်မျိုးလုံးနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Apalabrados.org လိမ်လည်ပြီး Apalabrados တွင်အနိုင်ရ
ရေးသားသူ: IOAPPS MOBILE SOLUTIONS SL ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Worder: Appalabrados မှာအနိုင်ရဖို့ဘယ်လိုသုံးမလဲ။